Meeldhexaadka ah Box, dibadeed kayak, kayak Kalluumaysiga, Guddiga casheeyo, Istaag Up taki - Kuer
Iceking meeldhexaadka Taxanaha aan
Tarpon riixay 10 fuudh
Tarpon riixay 13ft
Mini Dace 10 fuudh Angler Pro
BIG Dace 13ft Angler Pro
ku taalla gobolka
Sot kayak aasaasiga ah
Dhexsocoto 1 + 1
uunana socod kayak
Istaag Board taki Up
SUP-10 fuudh (2016version)
waxaad huwataa buufiyo
Ay ishu Rod Holder
haysta ushii radi
Accessories meeldhexaadka ah
La asaasay 2012 at deegaanka xeebta ah ee Ningbo, Shiinaha, Kuer Group waxa uu ku dhashay ka fikradda ah in qof walba uu u qalmo ah wax soo saarka caag ah oo tayo sare leh Roto-doorsoon. From fikrad this, waxaan bilaabay line a alaabta Roto-doorsoon shiidaa lahayn iyadoo qiimaha macquulka ah. Our R & D kooxda uu leeyahay waayo-aragnimo badan 5-10 sano ee waxyaabaha caag rotationally doorsoon. Kayaks iyo coolers waxaa kibir xusna, danbeeyay, mashuurca, la sugay soo saaray Kuer Group. Haddaba Kuer Group leh saddex magac: kayak qabow, ICEKING, KUER.
Su'aalaha ku saabsan waxyaabaha our ama codsi pricelist, fadlan buuxi aad email iyo fariin naga tegin la badeecada aad xiisaynayso. Waxaan ka heli doontaa dib si aad u 24 saacadood gudahood.